परिक्षा नजिकिदै गर्दा कक्षा १०,११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका बिहानै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! - हाम्रो देश
परिक्षा नजिकिदै गर्दा कक्षा १०,११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका बिहानै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दोस्रो चरणको कोरोना महामारी बढ्दै गए पनि एसईई लगायत कक्षा ११ र १२ का विद्यालय तहका सबै परीक्षाहरु तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।
हामी त्यसै पनी एकवर्ष पछाडि हिँडिरहेका छौं । अब परिक्षा स्थगित गर्न नसकिने उनले बताएका हुन् । विद्यार्थी हरुलाई उनीहरूको परिक्षा समयमा हूने र मेहनत साथ आफ्नो तयारीमा लाग्न उहाँले अनुरोध समेत गर्नु भयो ।